निषेधाज्ञामा अझै कडाई कि खुकुलो ? साझा धारणा बनाउन वृहत छलफल सुरु – Nepal Japan
निषेधाज्ञामा अझै कडाई कि खुकुलो ? साझा धारणा बनाउन वृहत छलफल सुरु
नेपाल जापान १६ भाद्र २०:४७
काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जारी गरिएको निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्ने बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अझै कडाइ गर्न माग गर्दै आएको छ भने उपत्यका नगरपालिका फोरमले पनि सोही माग गरिरहेको छ ।
यसबीचमा जारी निषेधाज्ञा सकिन एक दिन बाँकी रहँदा तीन जिल्लामा जारी निषेधाज्ञालाई कुन स्वरुपमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल शुरु भएको छ । निषेधाज्ञाको बारेमा उपयुक्त निर्णय गर्न काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल शुरु गर्नुभएको हो ।
उपत्यका नगरपालिका फोरमले भने अझै कडा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सुझाव पठाएको छ । फोरममा उपत्यकाका १८ वटै पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख आबद्ध हुनुहुन्छ । फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा सङ्क्रमण बढ्दै गएको देखिन्छ, त्यसैले हामीले अर्को एक हप्ता थप कडाइ गर्न सुझाव दिएका छौँ ।” उहाँका अनुसार सर्वसाधारणले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गरिरहेका छैनन् । त्यसैले नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेका अनुसार अहिले मुलुकका ४३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । ४७ मध्ये केही हिमाली जिल्लामा सुधार आएकाले निषेधाज्ञा हटाइएको लामिछानेले बताउनुभयो । गृहको अनुगमनमा आदेशको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नै छ ।
आदेश जारी नगरिएको भए अवस्था भयावह हुनेतर्फ उहाँले सबैमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अझै आवश्यकता देखिएमा स्थानीय प्रशासनलाई आवश्यक निर्णय लिन अधिकार रहेको उहाँको भनाइ छ ।